Sida loo Midhadh Video ka YouTube la One Click
> Resource > YouTube > Sida loo Midhadh YouTube Video Si fudud
YouTube, meel kulan malaayiin xiiso leh videos ah, sidoo kale waa engine labaad ee ugu weyn raadinta ee adduunka. Taas oo macnaheedu yahay waa maxay? Mar kasta oo ay dadku rabaan in ay ka heli videos, ay si toos ah u tag YouTube inay baadhaan sababta oo ah waa gaar ah ee ilaha video weyn.
Inta aad marin u badan oo videos on YouTube yeelan karaan, waxaa jira fursad aad rabto in aad iyaga la wareegaan website-ka si ay ugu raaxaystaan ​​offline loo maqli karo. Laakiin sida in ay la wareegaan YouTube videos si fudud? Halkan waa jawaabta su'aashaada. Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) gelineya inaad in ay la wareegaan video ka YouTube kaliya click ah. Waxa ka sii badan sameeya. Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo goolka YouTube videos in qaab kasta oo saaxiibtinimo oo ay kombuyuutarrada gacanta aad. Waxay u egtahay xiiso leh hadda? Bal aynu eegno sida ay u hoos ku shaqaysaa.
Click Download icon ee kor ku xusan oo aad u hesho this YouTube video grabber lagu rakibay on your computer. Halkan yimaado hage tallaabo-tallaabo.
1 Raadi videos aad jeceshahay on YouTube.com
Isticmaal browser ah sida IE, Firefox iyo Chrome in ay galaan YouTube.com oo heli videos aad jeceshahay in uu ciyaaro. Intaa waxaa dheer, barnaamijka oo bixiya dhisay-in browser ee tab Online Video aad u dhirtuba YouTube videos.
2 cuskato YouTube
Marka riyaaqayaa video ah, waa in aan aad illowdo in aad mouse aad dulqabo in dhinaca kore ee midig ee shaashada video ah. Waxaa waxaad ka heli kartaa button Download ah. Riix badhanka iyo barnaamijka ay bilaabi doonaan in ay la wareegaan video ka YouTube.
Si kale waa in ay la wareegaan videos by url. Xaq-riix video ah oo nuqul ka url ah. Markaas tago barnaamijka si riix badhanka URL koollada. Sidaas, waxaad xitaa ma haysanno in la furo video, kuwaas oo kaa caawin kartaa waqti badbaadiyo.
3 Beddelaan YouTube videos in qaab kasta oo
Ka dib markii videos waxaa goolka, ay u badan tahay waxaa laga yaabaa in qaab flash ah. Waa wax iska caadi ah in aad iyaga badalo qaab kale si ay u haboon qalabka kala duwan.
Tani waxay si fudud loo samayn karo barnaamijkan. Raadi videos ee qaybta soo bixi oo guji Beddelaan on xaq. Markaas waxaad dooran kartaa qaab caadi ah ama xitaa qalab sida iPad in ay qaab wax soo saarka. Riix OK u bilowdo nidaamka soo celiyaa.
Ka dib markii in, waxaad xaq u-riixi kartaa videos ee qaybta diinta ka heli meesha ay ku kaydsan on your computer. Markaas nuqul ka videos ka gal qalabka aad.
By jidkii, taas grabber YouTube ma qabsoomayn oo kaliya kartaa YouTube videos, waxa ay sidoo kale soo dhufsan karto videos ka goobood +1000 videos kale sida vimeo, Dailymotion, Hulu iyo in ka badan. Waxaa mudan yahay in aad isku day.
Hel Great All-in-Mid ka mid ah YouTube Downloader iyo Converter
Dhammaan Talooyin in aad u baahan tahay YouTube Channel
Sida loo Helo and Download YouTube Full Movies